Iye CEO we Instagram anoti parizvino hapazove neapp ye iPad | IPhone nhau
Instagram CEO inoti hapazove neAppad app izvozvi
Toni Cortés | | IPhone maapplication
Izvo ndezvimwe zvezvinhu izvo a priori zvisinganzwisisike zvakanyanya, kana usiri mukati memakambani akabatanidzwa uye iwe uchiziva zvikonzero zvinovatungamira kuti vaite dzimwe sarudzo dzisinganzwisisike. Imwe yeiyi ndeiyi Nei pasina Instagram app yeIpad. Hazvitsanangurike.
Iyo Instagram social network yatove nemakore mashoma asi ichiri kushanda zvizere. Izvo zvinowanzoenderana nekugovana yako mifananidzo: mapikicha uye mavhidhiyo. Tinobvumirana kuti makamera ePads haasi iwo akanyanya kukodzera kutora mapikicha akanaka kuti abudiswe, asi pachinzvimbo iwo ane akajeka masikirini uye An Instagram app paPadad angave akanaka. Nhasi CEO wekambani ataura nezvazvo, achiisa nyaya pasi.
Tiri muna 2020 uye zvinoita sekusanzwisisika kuti pachine pasiri chikumbiro chePad bakeng Instagram, chimwe cheanonyanya kukosha masocial network munyika. Vhiki rino mushandisi akabvunza Adam Mosseri, CEO we Instagram, kuburikidza ne Twitter, iye ndokupindura.
Mosseri Anopokana kuti chikonzero nei vasina kugadzira chikumbiro chePadad ndechekuti kambani haina zviwanikwa zvakakwana zvekuchengetedza Instagram pamapuratifomu maviri akasiyana senge iPhone nePadad. Isu tese tinoziva kuti Instagram yakatengwa neFacebook muna2012, kuitira kuti "kushomeka kwezviwanikwa" kusapinda mukati.
Akataura zvakare Instagram "inoda kuvaka iyo iPad app."
"Asi isu tine vanhu vazhinji kwazvo, uye mijenya yekuita, uye haina kubuda sechinhu chinotevera chakanak kuita."
Iyo iPad ine makore gumi ekuberekwa. Pamwe panguva iyo makumi maviri, ipapo?
- Chris Welch (@chriswelch) February 15, 2020
Mazwi ake chaiwo anga ari:
Tinoda kugadzira iyo iPad app, uye kunyangwe tiine vanhu vazhinji, isu tine zvakawanda zvekuita, uye handicho chinhu chedu chekutanga kukoshesa zvakadaro.
Mumakore apfuura kwave kune akati wandei-echitatu-bato kunyorera kwePadad iyo yaishandisa iyo Instagram API, asi kambani yakachinja iyo API ndokubvisa ivo kubva pamusika, pasina kunyatso kugadzira yavo yega application. Izvo zvinoenderana nekuti pane zvakakwana neiyo Instagram webhu kunyorera paPad, uye inogona kuwedzerwa kuchiratidziro chemumba ne Safari. Zviripachena, hazvingave zvakafanana nechakanaka chakatsaurwa kunyorera.
Ini ndakati, iwo masarudzo ebhizinesi asinganzwisisike. Hazvingadhuri zvakanyanya kutsanangura chikonzero cheichi chinzvimbo chisinganzwisisike uye kwete kuzvipembedza nekutaura kuti vanoshaiwa zviwanikwa. Chokwadi Mark Zuckerberg haana kusekeswa neiyi tweet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Instagram CEO inoti hapazove neAppad app izvozvi
Apple Mamepu atove anowedzera rutsigiro rwekutakura veruzhinji mumaguta eEurope
HomeKit rutsigiro rwuri kuuya kuLysys tri-band mairaira munguva pfupi